RW Saacid oo dhalinyarada Muqdisho ku booriyey in ay ka qayb qaataan horumarka dalka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 30, 2013 2:57 b 0
Muqdisho, November 30, 2013 – Ra?isal wasaaraha xukuumada Soomaaliya mudane Cabdi faarax shirdoon Saacid iyo xubno ka tirsan gollaha wasiiradda ee dowladda ayaa maanta Muqdisho kulan kula yeeshay qaar ka mid ah urrurada dhalinyarada ee caasimada.
Ra?isal wasaare Saacid iyo dhalinyarada ayaa wax badan ka wada sheekaystay, waxaana inta badan kulanka diirada lagu saaray in dhalinyaradu qayb ka noqdaan, xasiloonida wadanka, iyo soo celinta adeegyada asaasiga ah ee dalku u baahan yahay.
Mudane Saacid ayaa sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwii dalku ka degi waayey mudadii burburka lagu jiray, waxaa uu xusay in dhibaatooyinka dalka ka dhacay iyaga loo adeegsaday oo ay qayb wayn ka ahaayeen burburka.
Ra?isal wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadiisa ay balan-qaadayso in ay isbedel ku samayso dhalinyarada, iyadoo la abuurayo adeegyo horumarineed iyo mashaariic si ay shaqo u helaan, sidoo kale dowladda ayaa xoojinaysa waxbarashada wadanka.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore ugu baaqday urrurada dhalinyarada wadanka in ay ka qayb qaataan howlaha dib u soo kabashada wadanka, mashaariicda, waxbarashada, shaqo abuurka iyo ka war haynta dhalinyarada ayaa Ra?isal wasaare saacid ku tilmaamay in ay tahay guusha wadanka.
Dhegeyso: hadalka ra?isal wasaare Cabdi faarax shirdoon saacid uu ku yiri dhalinyarada uu la kulmay